War Saxaafadeed: Xil-ka-Qaadista Af-hayeenkii Hore ee Xisbiga Kulmiye ee Bristol | Maalmahanews
War Saxaafadeed: Xil-ka-Qaadista Af-hayeenkii Hore ee Xisbiga Kulmiye ee Bristol
XISBIGA KULMIYE BRISTOL UK
War saxaafadeed: Xil-ka-qaadista Afhayeenkii hore ee Xixbiga Kulmiye ee Bristol
Afhayeenkii hore ee Xisbiga Kulmiye ee Bristol, Farxaan Faarax Kooshin, waxa xilka laga qaaday 30kii January 2016 kadib markii uu ku kacay habdhaqameedyo ka soo horjeeda shuruucda iyo xeer hoosaadka xisbiga.
Xil-ka-qaadistani waxay dhacday kadib markii uu Farxaan baal maray habdhaqameedkii shaqada xisbiga ee ku dhisnayd ilaalinta xeerarka xisbiga, maamul wanaag, kala dambayn iyo ixtiraam, wadashaqayn iyo isku duubnaan. Inkastoo laba jeer oo hore looga digay in uu ka digtoonaado waxyaabaha dib-u-dhac ku keenaya hawl maalmeedka laanta Bristol, lana siiyay fursado badan oo uu wax kaga bedelo dabeecadahaa lidka ku ah habsami u socodka shaqada, wadashaqaynta guddiga iyo xubnaha iyo horumarinta xisbiga, nasiib darro kamuu faa’iidaysan fursadahaa qaaliga ah iyo taageeradii loo fidiyay eel ala garab taagnaa.
Haddaba 30kii Janaury 2016 waxa kulan isugu yimid hoggaanka laanta Bristol oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Laanta Bristol, Mustafe Xaashi, Xoghayaha, Naasir Suufi, iyo Farxaan FaaraxKooshin (oo markaa ahaa Afhayeenka) si arrintan wax looga qabto. Waxa aad loogu dadaalay sidii Farxaan loo siin lahaa fursado kale (iyo taageeraba) oo uu wax kaga bedelo dabeecadahaa lidka ku ah habsami u socodka iyo habdhaqameedka shaqada xisbiga. Si kastaba ha ahaatee, dadaalkaasi wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay; shirkaa waxa lagu go’aansaday in xil-ka-qaadis lagu sameeyo Farxaan Faarax Kooshin. Sidoo kale go’aankan waxaanu ku wargelinay Guddoomiya Xisbiga Kulmiye ee UK, Xariir Xirsi Aaadan, oo naga aqbalay.
Waxa aan mar kale halkan ku caddaynayaa in Farxaan Faarax Kooshin, laga bilaabo 30kii January 2016, aanu wax xil ah u hayn Xisbiga Kulmiye ee Bristol.
Waxa kale oo aan idin ogeysiinayaa in guddiga xisbiga Kulmiye ee Bristol ay ka shireen, go’aana ku gaadheen in warqadii aqoonsiga xubinimada laanta Bristol lagala noqdo Farxaan Faarax Kooshin kadib markii uu qaaday tallaabooyin uu xaalad aan jirin kaga dhex abuurayo, doonayana in uu ku kala fogeeyo xubnihii fikirka siyaasiga ah isku raacay, ee weliba wadashaqaynta wanaagsani ka dhexeysay.
Ugu dambeyntii, waxa aan fursaddan kaga faa’iideysanayaa in aan u mahad celiyo Farxaan Faarax Kooshin, Afhayeenkii hore ee Xisbiga Kulmiye ee Bristol, muddadii gaabnayd ee uu nala shaqeeyay.
Xoghayaha Xisbiga Kulmiye ee Bristol